ဖူးစာအုပ်1 – King🇲🇲
July 10, 2018 July 10, 2018 by 🇲🇲King🇲🇲
နွေရာသီပူအိုက်သောကာလမို့ထင်ပါရဲ့……ခင်မြင့်ဟာ ဘောလီအကျီင်္လေးသာ ဝတ်ပြီး အိပ်ပျော်နေ၏။
အိုက်စပ်ပူလောင်နေသဖြင့် လူးလွန့်ရင်းနှင့်ခါးကထမီဟာလည်း ပေါင်ရင်းထိကို လန်တက်နေသည်။သတိရလို့ကြည့်လိုက်တော့ မိမိကိုယ်သည် ခင်မြင့်၏ကုတင်ဘေး တွင် မတ်တပ်ရပ်လျှက်သားရှိနေသည်ကို သိရှိလိုက်ရသည်။
အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ လူပျိုသိုးလေးတစ်ယောက်နှယ် ရင်တခုလုံးတုန်ရီနေသလို ဒူးများကလည်းမနိင်ချင်အောင်ဖြစ်လာသည်။ညွတ်ခွေကျလာသဖြင့် ကုတင်ကိုအားပြု လိုက်မိ၏။
သိမ့်ကနဲ ကုတင်လှုပ်သွားသဖြင့် ခြင်ထောင်အတွင်းမှ ခင်မြင့်သည်……….
ဆိုတဲ့ ခင်မြင့်ရဲ့အိပ်ချင်မူးတူးခေါ်သံကြောင့် မောင်မောင်တစ်ယောက် ညို့ချက်မိသလို ဆတ်ကနဲ ကုတင်ပေါ်ကခြင်ထောင်ထဲကို ရောက်သွားရသလို လူဟာလည်း တဆတ်ဆတ်တုံနေရသည့်အဖြစ်……။
လို့ပြောဆိုပြီး မောင်မောင်ရဲ့ကိုယ်လုံးကို သူမဘက်ဆွဲလိုက်သည်။ဒိတ်ကနဲ ရင်အစုံဟာ အပြင်ကိုပြုတ်ထွက်သွားပလားဟုပင် ထင်မှတ်လိုက်ရသည်။
နွေးထွေးနူးညံ့သော ခင်မြင့်ရဲ့လက်အစုံနဲ့အဖက်ခံလိုက်ရတော့ မောင်မောင်တို့ သွေးဆူလာပြီး အေးအေးမော်နဲ့ဖိုက်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်း သူ့ကိုတွန်းအားပေးနေ
သည်မို့ မောင်မောင်ရဲ့လက်တွေဟာ ခင်မြင့်ရဲ့နောက်ကျောကိုသိုင်းယှက်ဖက်တွယ် လိုက်ပြီး နီထွေးစွတ်စိုနေတဲ့ ခင်မြင့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ဖိကပ်နမ်းစုပ်လိုက်သည်။
ပူနွေးချိုမြိန်သောအနမ်းစကြောင့်ပင်ထင်…..ခင်မြင့်သည်လည်း အချစ်သွေးတို့ ထကြွလာချေပြီ။
မောင်မောင်သည် နောက်ကျောမှနေ၍ ခင်မြင့်ရဲ့ဘော်လီအင်္ကျီချိတ်တွေကို ဆွဲဖြုတ်ကာချွတ်ပြစ်လိုက်ပြီး ဆွဲပါကိုင်ပါများသဖြင့် ဖေါင်းကားပြည့်ဖြိုးလုံးမောက်နေတဲ့ ခင်မြင့်နို့ကြီးနှစ်လုံးကို သူ၏လက်များဖြင့် အသာအယာအုပ်ကိုင်ပြီး ဖွဖွရွရွလေး ပွတ်ပေးခါ မတ်တောင်နေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ချောင်းကြားမှာ ဖိကြိတ်ပွတ်ချေလိုက်တော့…..
ခင်မြင့်ခါးလေးကော့တက်ရင်းက မပွင့်တပွင့်ငြီးငြူမှုပြုလိုက်၏။မောင်မောင်ရဲ့ လက်အစုံကလည်း သူမရဲ့ပေါင်တွင်းသားတဝိုက်ကို ကတုံကရင်ကြီးနဲ့ပွတ်သပ်ပေး၏။
ဖူးဖူးရွရွအဖုတ်ကလေးတဝိုက်မှာတော့ စောက်မွှေးတွေက ထိုးထိုးထောင်ထောင်မို့ မောင်မောင်ဆုပ်ဆွဲလိုက်သည်။
ခင်မြင့် တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးနေရင်းမှ မပွင့်တပွင့် တိုးတိုးလေးကြိတ်၍ပြောလိုက်၏။
ဘယ်အချိန်က ချွတ်ချလိုက်မှန်းမသိ မောင်မောင်ခါးတွင် ပုဆိုးမရှိတော့ သူ့ပေါင်တွင်းပိုင်း ပေါင်သားများနှင့် ခင်မြင့်၏အိစက်ကြီးမားသော ပေါင်လုံးကြီးများ နွေးထွေးစွာထိတွေ့မိကြ၏။ဝိုးတဝါးအလင်းရောင်အောက် ခြင်ထောင်အတွင်းမှာတော့ အသက်ရှုသံပြင်းပြင်းနှင့်အဝတ်များလှုပ်ရှားသံများကိုသာ ကြားနေပြီး…နှစ်ဦးစလုံး
ခင်မြင့်၏တသွေးတမွေးကိုယ်လုံးလေးကို မောင်မောင်ပွတ်သပ်နှိုးဆွနေသည်ကို ခင်မြင့် ယားယံစွာခံစားရင်း တွန့်ကနဲ ဆတ်ကနဲ…လိမ်ကော့တက်သွားရရှာပြန်သည်။
မောဟိုက်တုံရီသံဖြင့် ခင်မြင့်ရဲ့အသံလေးများက မောင်မောင့်ရင်ကို လှုပ်ခတ်သွား စေသည်။ဖိုမ…အထိအတွေ့ကြောင့် နှစ်ယောက်စလုံးမှာ တုံတုံလှုပ်လှုပ်ဖြင့် ကိုယ်တွယ်စမ်းသပ်နေမိကြပြန်၏။
မောင်မောင်လက်တဖက်က ခင်မြင့်၏ဖေါင်းအိနေသော စောက်ဖုတ်ကလေးကို စမ်းပြီး အကွဲကြောင်းအလိုက်ထက်အောက်ပွတ်သပ်ပေးမိသလို……..
ခင်မြင့်၏လက်တစ်ဖက်ကလည်း မောင်မောင်၏လီးကို ဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ညှစ်ပေးသဖြင့် ပူနွေးနှုးညံ့သောအထိအတွေ့လေးများကြောင့် လီးကြီးမှာလည်း တဖြေးဖြေးမာတင်း လာပြီး ထောင်ထလာလေသည်။
မောင်မောင်သည် အရွယ်နှင့်မမျှသောလီးကြီးက ခင်မြင့်လက်ထဲဝယ် ပြည့်ဖြိုးတင်းမာကာ လက်တဆုပ်စာလောက်ကြီးထွားလွန်းလှ၏။
ခင်မြင့်သည် သန်းလွင်နှင့်အိမ်ထောင်ကျသည့် တပတ်ကျော်ကျော်အတွင်းမှာ ညစဉ်ထိတွေ့လိုးခံဖူးပြီး သန်းလွင်ရဲ့လီးကို ကိုင်တွယ်ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ယခုလောက် မကြီးထွားဟုစိတ်ထဲမှထင်မှတ်မိလိုက်ပေမယ့် ကာမရဲ့လောင်မြိုက်မှုကြောင့် စဉ်းစား တွေးခေါ်မှုခွန်အားများမှာ ယုတ်လျော့နည်းပါးစေလေသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေက ခင်မြင့်ကို ချုပ်ကိုင်လွှမ်းမိုးလျက်ရှိ၏။တခုဘဲ ခင်မြင့်စိတ် ထဲမှာ စနိုးစနောင့်ဖြစ်မိသည်။သန်းလွင်၏ချွေးနံ့သည် အနည်းငယ်စူးလှ၏။ယခု အမှောင်ထဲ၌မိမိကို အားပါးတရကြီးဖက်ပွေ့ပွတ်သပ်နေသောအနံ့ကတမျိုး တခါတရံ
ချွေးနံ့က စူးရှသလိုရှိပြီး တစ်ခါတရံ မွှေးမွှေးလေးချိုအီနေပြန်သည်ကိုတော့ ခင်မြင့် တဒင်္ဂစဉ်းစားမိလိုက်သလိုရှိသည်။
“…..ကို…..ကိုလွင်…..” ခင်မြင့် ကြီးထွားသန်မာသော လီးကြီးကိုဆုပ်ကိုင်ရင်း တိုးညှင်းစွာခေါ်ကြည့်၏။….တုံ့ပြန်သံထွက်မလာဘဲ ပြင်းထန်သောအသက်ရှုသံနှင့် အတူနှာခေါင်းမှပူနွေးသောသက်ပြန်လေက ခင်မြင့်၏မျက်နှာကိုရိုက်ခတ်လာသည်။
တဆက်ထဲမှာဘဲ လက်တွေက မိမိရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးနှိုက်ကလိပေးနေသလို လုံးကျစ်မာခဲနေတဲ့နို့တွေကိုလည်းတဘက်စီ တလှဲ့စီစို့ပေးခြင်းကို ခံစားလိုက်ရပြန်တော့
ခင်မြင့် မတူသော ဖိုမ ဆိုသောအထိအတွေ့တွေက ခင်မြင့်အားရစ်ပတ်ချုပ်နှောင်လာ သဖြင့် ရုန်းထွက်နိုင်စွမ်းတွေ လွင့်မျောကုန်ပြီဖြစ်သည်။
မောင်မောင်ကလည်း တလုံးတပါဒမျှပြောဆိုမနေတော့ဘဲ သူမကိုအပျိုဘဝထဲက ပိုးပန်းပြီးစိတ်မှန်းနဲ့ဂွင်းတိုက်ခဲ့ရပေါင်းများလှပြီမို့ ယခုလက်တွေ့အပိုင်နှိပ်ရန်ကိုသာ စိတ်စောစွာပြုမူနေလေရာ…ဘာဆိုဘာမှအပိုပြောမနေတော့…ဆရာဆရာ့ကြီးတွေရဲ့ သင်ကြားပို့ချချက်တွေ၏သင်ခန်းစွာတွေကို နံပါတ်စဉ်အလိုက်ကာမရဲ့သော့ချက်များ ကိုသာတွင်တွင်ကြီးဖွင့်လှစ်ဖို့ ကြိုးစားနေလေတော့သည်။
တုံရီလှိုက်ဖိုသောအသံတိုးညှင်းစွာထွက်ပေါ်လာသည်။ခင်မြင့် ဂနာမငြိမ်တော့ ပေါင်တွေကိုချဲလိုက်စုလိုက်နဲ့ ရာဂသွေးတွေဆူကုန်ပြီဖြစ်သည်။သူမရဲ့စောက်ဖုတ် အတွင်းသားနံရံများကလည်း တလှုပ်လှုပ်၊တရွရွနဲ့အရည်ကြည်များ ရွှဲရွှဲစိုစေပြန်၏။
မောင်မောင်သည် သူမ၏ပေါင်နှစ်ဖက်ကြား ဒူးထောက်၍အနေတော်ဖြစ်အောင် နေရာယူလိုက်ပြီး ခင်မြင့်၏ပြည့်ဖြိုးအိစက်နေသော ပေါင်နှစ်ဖက်ဆွဲကားမြှောက်ပင့်၍ သူ့ပေါင်ပေါ်တင်လိုက်သည်။
ပူနွေးသောလီးထိပ်၏အထိအတွေ့က ခင်မြင့်၏စောက်ခေါင်းဝမှတဆင့် တကိုယ်လုံး သို့ပျံ့နှံ့စီးဆင်းစေသည်မို့ မချင့်မရဲသောဝေဒနာတစ်ရပ်ခံစားလိုက်ရပြန်သည်။
လီးကို စောက်ခေါင်းဝတွင်တေ့ထောက်ပြီး ဂျိုင်းအောက်သို့လက်လျှိုသွင်းပြီး ပုခုံးနှစ်ဖက်အားပြုကိုင်လိုက်သည်……ပြီး…နွေးထွေးအိစိုသောခင်မြင့်၏နှုတ်ခမ်းကို ငုံခဲဖိကပ်ပြီး သူ၏လီးကို ဖိသွင်းလိုက်သည်။
လီးကြီးဝင်သွားပုံက ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပင်…..စောက်စိထိပ်လေးကိုထိုးဖိပြီးမှ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဖိဖိပြီးထိုးဝင်သွားခြင်းဖြစ်ရာ ဆီးခုံတစ်ခုလုံး ထူပူ၍ ကျင်တက်သွား၏။
ပြည့်သိပ်ကြပ်သိပ်နေသော အထိအတွေ့ကြောင့် ခင်မြင့်မှာ ချွေးလေးများပင် ပျံလာသည်။ကျယ်လောင်သောအသံဖြင့်လည်း မငြီးတွားရဲ…အပေါ်ထပ်မှာအိပ်နေကြ သော သန်းလွင် အဖေ၊အမေတို့နိုးသွားမှာစိုးသဖြင့် အံကြိတ်ခါ အသားလေးများ တဆတ်ဆတ်တုံသည်အထိ မာန်တင်း၍ ခံလိုက်ရသည်။
တင်းတင်းမာမာကြီးတိုးဝင်နေသော လီးကြီးက တဖြေးဖြေးနစ်ဝင်နေရာမှ ရုတ်တရက် ဗြစ်ကနဲ ဒုတ်ကနဲအသံတွေနဲ့အတူ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားသားအိမ်ဝအထိ စူးစူးနစ်နစ်ကြီးဝင်ရောက်လာသဖြင့် ခင်မြင့်အလန့်တကြား…”….အား..”ဟု အံကြိတ်၍
မောင်မောင်၏ရင်ဘတ်ကြီးကို ဆီး၍တွန်းထားလိုက်ရသည်။တပါတ်ကျော်ကျော် အလိုးခံထားဖူးသည့်စောက်ဖုတ်က ခုချိန်ထိကျိန်းနေဆဲကျပ်နေဆဲမို့ မောင်မောင်၏
စံချိန်မှီကြီးထွားရှည်လျားလွန်းသော လီးကြီးဒဏ်ကို အလူးအလဲခံစားနေရသည်။
တွန်းထားသောလက်နှစ်ဖက်မှာ တဆတ်ဆတ်တုံနေသည်။….တဟင်းဟင်းနဲ့ မာန်ထနေသော မောင်မောင် အရှိန်ကိုမလျော့ဘဲ ဖိ၍လိုးလိုက်ပြန်သည်။
နာကျင်စူးရှစွာပြောဆိုလာသော ခင်မြင့်ရဲ့တိုးလျှိုးတောင်းပန်သံကြောင့် မောင်မောင်က အလိုးအညှောင့်ကို ရပ်ပြီး…ရုန်းကန်ဖယ်ရှားနေသော ခင်မြင့်ရဲ့လက်အစုံကိုဖယ်ရှားခါ.. တဆတ်ဆတ်တုံနေသော သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းကို ဖိကပ်ငုံခဲစုပ်ယူလိုက်ပြီး သူမရဲ့နို့တွေကို ဖွဖွလေးပွတ်လိုက်….တင်းကနဲနေအောင် ဆုတ်ချေနယ်ဖတ်လိုက်…ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်း ကို ပွတ်သပ်ပေးနေပြန်ရာ……ခဏကြာတော့ ခင်မြင့်ရုန်းကန်ဖယ်ရှားခြင်းများငြိမ်သက် သွားသလို ပေါင်နှစ်လုံးကလည်း ယမ်းခါနေလေတော့၏။
အရင်းထိ နစ်ဝင်နေသောလီးကြီးအသာအယာချွတ်လိုက်သည်။စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်း သားလေးများ လီးကိုငုံခဲ၍ စုပုံပါလာလေသည်။
နောက်ထပ်အသာလေး ဖိကြိပ်၍ သွင်းလိုက်သည်။ခင်မြင့်တစ်ချက်မျှတွန့်ကနဲဖြစ်သွား ရပြန်သည်။ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရင်းမှ ခြင်ထောင်ကြိုးကလည်းပြုတ်ကျလို့ထွေးနေသည်ကို မောင်မောင်လက်တဖက်ကဖယ်ရှားရင်း…..ခင်မြင့်ရဲ့နို့တဘက်ကိုဆုပ်ကိုင်ဆွဲယူပြီး ဆက်၍လိုးလိုက်သည်။သွက်လက်သောဆောင့်ချက်….ရိုက်ချက်များဖြင့် အဆက်မပြတ်ဆက်၍ လိုးနေရာမှ ခင်ပြင်းပြင်းဝေဒနာကို ခံစားလိုက်ရသဖြင့်……
စောက်ပတ်ကလေးကွဲသွားသဖြင့် စောက်ဖုတ်မှာအနည်းငယ်ကျယ်သွားသလိုရှိပြီး ကြီးမားသောလီးကြီးက စောက်ခေါင်းအတွင်းပိုင်းသားအိမ်ထိ ထိထိမိမိကြီးပွတ်တိုက် လိုးသွင်းမိပြန်လေရာ……ခင်မြင့်နားဖျားခြေဖျားလေးများပူနွေးသွားပြီး…တဖျင်းဖျင်းဖြင့် နာကျင်ခံကောင်းဖြစ်လာတော့သည်။အောက်မှနေ၍ ဖင်ကိုပင့်မြှောက်ကော့ထောင်ပေးလာသည်။
ခင်မြင့်၏အားမလိုအားမရသံနှင့် အလိုမကျဟန်စွက်ဖက်သော စကားသံတစ်ရပ် မောင်မောင်နားမှာတိုးညှင်းစွာ ကြားလိုက်ရပြန်သည်။
အမှောင်တွင်း၌ ကြီးမားသောအပူလှိုင်း ကာမမီးလောင်မြိုက်ခြင်းကို ခံစားနေကြသော ခင်မြင့်နှင့်မောင်မောင်တို့နှစ်ယောက် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ဖက်တွယ်ရင်း လိုးနေကြပြန်သည်မှာ တဖြေးဖြေး အမြင့်ဆုံးအခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်သွားလေသည်။
ခင်မြင့် …တရှီးရှီး…..တကျွတ်ကျွတ်ငြီးတွားပြီးနောက် မောင်မောင်၏နောက်ကျောကို
တွဲဖက်ရမ်းခါရင်း……စောက်ခေါင်းအတွင်းမှသုတ်ရည်များ ပစ်ကနဲနေအောင် ပေါင်တွင်းကျောတွေတောင့်တင်း၍ ညှစ်ထုတ်ပစ်လိုက်ရင်းမှ ငြိမ်ကျသွားရလေသည်။
ထိုစဉ်မှာဘဲ မောင်မောင်ကလည်း စီးပိုင်ပိုင်ကြီးလိုး၍ကောင်းသောခင်မြင့်၏ စောက်ပတ်ညှစ်အားကြောင့်သူ့လီးထိပ်မှ သုတ်ရည်များကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ရင်းမှ ခင်မြင့်၏ကိုယ်ပေါ်သို့မှောက်ချပြီးဖင်ကိုဆတ်ကနဲ……ဆတ်ကနဲ..ညှောင့်ရင်းမှ အရသာထူးကို ခံစားရင်းမှိန်းကျသွားလေသည်။
နှစ်ယောက်သားတင်းကြပ်စွာဖက်တွယ်နမ်းရှိုက်အမောဖြေရင်းမှ ခဏအကြာမှာ မတိုးလွန်းမကျယ်လွန်းနှစ်ကိုယ်ကြားလေသံဖြင့် ခင်မြင့်၏နှုတ်ဖျားမှ မောလျတုံရီလှိုက်ဖိုသံဖြင့်……..
ဒ်ိတ်ကနဲ ထိတ်လန့်အံ့သြကာ ရုတ်ချည်းပင် သူမပေါ်မှ မှောက်လျှက်မှေးနေသော မောင်မောင် ခေါင်းနပန်းကြီးကာ ဆတ်ကနဲ ခေါင်းထောင်၍သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးဘေး တစ်ဖက်ကို တတောင်ဖြင့်ထောက်၍အံ့သြသောအမူအရာဖြင့် ခင်မြင့်အားကြည့်ရင်း….
သွားတော့ ငါ့ယောက်ျားလီးက ဒီလောက်လည်းမကြီး ရှည်လည်းမရှည်တော့ ငါ့သံသယစိတ်ကို ကြီးထွားလာတယ်ဟ….ပြုတ်ကျလာတဲ့ ခြင်ထောင်ကို နင်ဖယ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မှန်အိမ်ကအလင်းရောင်လေးနဲ့ပဲ ငါအားစိုက်ကြည့် လိုက်တော့ ငါ့ယောကျာ်းမဟုတ်ဘဲ နင်ဆိုတာ ငါသေသေချာချာကြီးသိလိုက်ရတယ်…”
“အင်း”….ခက်တော့ခက်သားဟ…မောင်မောင်ရ…မိန်းမသားဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါဘဲ ကြိုက်ချင်ကြိုက် မကြိုက်ချင်နေ ချစ်တာမချစ်တာ အသာထားစောက်ဖုတ်ထဲကို လီးဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ စောက်ပတ်ကလီးကိုမထွေးချင် မအံချင်ဘူးဖြစ်နေပြန်ရော.
“…ဘာဒါပေမဲ့လည်း…” ခင်မြင့်ရဲ့ မိန်းမဘဝဒဿနကို တမေ့တမောနားစိုက်ထောင် ရင်းမှ ခင်မြင့်ရဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်သပ်ဆုပ်ကိုင်ရင်း ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်လိုက်မိသည်။
နင်နဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ အချိန်ကလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အားပေးအုံးမှ
ကဲပါလေ…ဒါတွေပြောနေလို့ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူး…..နောက်တခါလုပ်မှာဖြင့် လုပ်တော့ဟာ…..နင့်အသပ်အနယ်….အရှိုက်တွေက ငါ့စိတ်တွေကို မူမမှန်အောင် ဖြစ်နေကုန်ပြီ…..နောက်ပြီးငါ့ယောက်ျားပြန်လာရင်လည်း ပြဿနာ……”
“….နင့်….ယောက်ျားသန်းလွင်….ကင်းတဲမှာဖဲရိုက်နေပြီဟ…..ဖဲချပ်ကိုင်နေရရင် မနက်လင်းအောင်ထိုင်ရာကမထစတမ်းဆိုတဲ့…အစားထဲကဘဲဆိုတာ နင်လည်းသိသား နဲ့ဟာ…ဒီကောင်…မနက်မိုးထိန်ထိန်လင်းမှ ပြန်လာမယ်ဆိုတာ…သေချာပေါက်ဘဲ…..”
ဖဲဆိုအသေရိုက်တာ……အိုးပစ်အိမ်ပစ်…ခုလည်းကြည့်လေ….သူ့မယားကို ဒီ့ပြင်လူ တက်လိုးနေပြီ….ငါတခုတော့ တောင်းပန်ပါရစေဟာ……”
“….အခုညဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို လူမသိပါစေနဲ့ဟာ….နောက်ပြီးငါ့ကိုလည်း အထင်မသေးပါ နဲ့လို့…..”
….နင့်ကိုလည်း ငါအထင်မသေးပါဘူးဟာ….အရင်ထဲက နင့်ကိုငါချစ်ခဲ့တာဟ…အခုမှ”
မောင်မောင်ရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့…..လီးကိုဖွဖွရွရွကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်နေတဲ့ ခင်မြင့်.. လူးလဲထကာ ကုတင်ပေါ်၌ လေးဘက်ကုန်းပေးလိုက်၏။သူမ၏ကြီးမားပြည့်ဖြိုးလှတဲ့ နို့နှစ်လုံးဟာ ရမ်းခါ၍နေသည်။မောင်မောင်သူမရဲ့ခါးပေါ်ကိုလက်နဲ့ဖိလိုက်တော့ ခါးလေးကော့ ဖင်လေးအောက်ပြစ်သွားကာ အရည်များဖြင့်စိုရွှဲနေသောစောက်ဖုတ်ကြီး ဟာ လက်တစ်ဆုပ်စာမှပြူးပြူးကြီးနောက်သို့ပြူးထွက်လာသည်ကို မီးရောင်ဖြင့် ဝိုးတဝါးမြင်တွေ့လိုက်ရသည်။
မောင်မောင်ဒူးထောက်ထိုင်နေရာမှ ခင်မြင့်၏ဖင်စုံကြီးရဲ့နောက်ကနေ မြင်းထိုင် အနေအထား မကုန်းမကွဖြင့် နေရာယူပြင်ဆင်လိုက်၏။သူ၏ကြီးမားရှည်လျားနေတဲ့ လီးကြီးကိုအရင်းမှကိုင်ကာ အကွဲကြောင်းလေးအထက်အောက် ဘယ်ညာကို လီးထိပ်ဖြင့်လူးလှိမ့်ပွတ်သပ်ဆွဲယူလိုက်၏။
နင်အဲသလိုကြီး မထိတထိမလုပ်စမ်းပါနဲ့…ငါ …မနေတတ်ဘူးဟ……”
သက်တူရွယ်တူ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေမို့ ရဲတင်းပွင့်လင်းစွာ ခင်မြင့်ပြောဆိုလိုက်သည်နှင့် မောင်မောင်ကလည်း လီးကြီးကိုသူမ၏စောက်ခေါင်းဝတွင် တေ့ထောက်၍ သေးကျင်နေသည့်ခင်မြင့်၏ခါးလေးကို စုံကိုင်စွဲကာ မဟားတယားဖိသွင်းလိုက်သည်။ ပြီးချက်ဆောင့်ချက်မှန်မှန်လေးဖြင့် လိုးဆောင့်နေပြန်ရာ ခင်မြင့်မှာအသဲစွဲအောင် ကောင်းနေသမို့ စောက်ခေါင်းထဲက သုတ်ရည်များ အဆမတန်ပန်းထုတ်လိုက်မိရပြန်သည်။
လီးကြီးကလည်း ခပ်သွက်သွက်လေးဆောင့်လိုးနေရာ တဘွတ်ဘွတ်အသံများ မြည်ဟီးရရှာ၏။
စကားကိုအပြန်အလှန်ပြောဆိုနေရင်းမှ မောင်မောင်သည်တွဲလဲကျရမ်းခါနေတဲ့ ခင်မြင့်ရဲ့နို့နှစ်လုံးကိုစုံကိုင်စွဲယူဖြစ်ညှစ်ဆုပ်ချေလိုက်၏။
မောင်မောင်ကလည်း ဖိုးကျိုင်းတုန်ဖြစ်သွားခါ ဆွဲကိုင်ဆုတ်ချေနေတဲ့နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လွှတ်လိုက်ပြီး သူမရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကို လက်များဖြင့်ဆွဲကိုင်အားပြုပြီး အသားကုန်ပစ်ပစ် ဆောင့်ပါလေပြီ……
ဒုတိယအချီမို့ စောက်ခေါင်းကလည်း ကျပ်အရည်တွေကလည်း ရွှမ်းစိုနေသည်မှာ လေအဝင်များပြီးလီးကြီးကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တိုင်း အီးပေါက်သံကဲ့သို့ လေသံများထွက်ပေါ် လာသည်။
လိုးနေကျ သန်းလွင်၏လီးမဟုတ်ဘဲ…..တစိမ်းလီးတချောင်းအဝင်ခံရပြီမို့ အသစ်အဆန်းတမျိုးလိုပင်….အီ…ဆိမ့်အောင်ကောင်းသွားရသူကတော့ ခင်မြင့်ပင် ဖြစ်၏။
ခေါင်းအုံးပေါ်ခေါင်းစိုက်အားပြုပြီး လက်နောက်ပြန်ဖြင့် မမှီမကမ်းမောင်မောင်ရဲ့ပေါင် တွေကို ဆွဲကိုင်အားပြုဖိကပ်သလို သူမ၏ဖင်ကြီးကိုလည်း နောက်သို့ကော့ကော့ပေးခါ အလိုးခံလိုက်မိလေသည်။
ခင်မြင့်ဖင်ကြီးနှစ်လုံးမှာ လှိုင်းထ၍တုံတုံသွားသလို နို့ကြီးနှစ်လုံးကလည်း ဘယ်ညာရမ်းခါ၍ပင် နေ၏။နှစ်ဦးစလုံးကာမအထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်လာကြပြီး အသက်ရှုသံများပြင်းထန်နေ၏။…မောင်မောင်ကလည်း သူမ၏တင်ပဆုံကို လက်ဖြင့် တဖျန်းဖျန်းရိုက်ကာ အားမာန်အပြည့်ဖြင့် လိုးဆောင့်နေလေ၏။
ခင်မြင့် မျက်တောင်လေးများ မှေးစင်းသွားပြီး သူမ၏စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ သုတ်ရည်များကိုပြစ်ကနဲပန်းထုတ်ရင်း ငြိမ်သက်သွားသည်နှင့်မရှေးမနှောင်းမှာပင် လေးငါးဆယ်ချက်ဖိဆောင့်လိုးလိုက်ရင်းမှ မောင်မောင်တင်ပါးများ ခွက်ဝင်သွားအောင် လီးထ်ိပ်မှသုတ်ရည်များကို ခင်မြင့်၏စောက်ခေါင်းကျဉ်းလေးထဲကို ပန်းထုတ်လိုက်ရင်းမှပင်…..နှစ်ဦးသားကုတင်ပေါ်မှောက်ရက်အနေအထားဖြင့် မိန်းမော၍ သွားလေတော့သည်။
အိမ်ထဲမှ ခေါင်းစုတ်ဖွားနှင့်ထွက်လာသော မောင်မောင်အားအသံများကပ်၍ ခေါ်လိုက်သော ထွန်းလွင်၏စကားသံကြောင့် အလန့်တကြားခေါင်းမော့၍ တုံ့ပြန်ထူးလိုက်ရမိသည်။
“…….ငါသိပါတယ်….မောင်မောင်ရာ…..မနေ့ညက တညလုံး….ငါ့ညီမခင်မြင့်နဲ့ မင်းတညလုံးဖိုက်ကြတာ…..”
“…..မိန်းမနဲ့ယောကျာ်းဆိုတာ ထိမိရင်မီးပွင့်တယ်ဆိုတာ ဓမ္မတာပါဘဲကွာ…သူလည်း စောက်ဖုတ်ထဲလီးဝင်သွားပြီးဆိုတော့…အင်း….ငါကတော့ ပြဿနာမရှာပါဘူးကွာ…
…မင်း သန်းလွင်ကိုတော့ ဂရုစိုက်ကွာ….တော်ကြာ မယားထိ ဓားကြည့်ဆိုတာ ဖြစ်နေဦးမယ်….”
အပြာစာအုပ် အောစာအုပ် မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
ဒီနေ့မသန်းကစောစောထတယ်..ကျတော်လည်းစာကျက်နေတုန်း..”မမသန်း.စောလှချည်လား..”..”ဒီနေ့စနေလေ..ဆိုင်စောစောသွားမလို့..”ဪ”””ငါအောက်သွားမလို့..လိုက်ခဲ့ပါဦး”..မသန်းကသရဲကြောက်တက်တယ်..”မမသန်းမြန်မြန်လုပ်နော်..ကျတော်..စာမရသေးဘူ..””အေးပါဟယ်..”ကျတော်လည်း..မမသန်းအိမ်သာတက်နေတာ.ထိုင်စောင့်နေရတယ်..”မမသန်း..မပြီးသေးဘူးလား..ဘာတွေလုပ်နေလဲ..’လုပ်စရာလားဟဲ့.”..”သိပါဖူးဗျာ..ယောက်ကျားက..ခရီးထွက်နေတော့..ဟားဟားဟား…… ”..မင်းမင်း”..နင်နော်..”ပေါက်ကရ.မပြောနဲ့..ငါဗိုက်နာနေတာ..မနေ့က..မရမ်းသီးတွေ.စားလိုက်လို့”..”ကဲပါ…ဖြည်းဖြည်းလုပ်”…ခဏနေတော့..ရေဆေးသံကြားလိုက်တယ်..”’ပြောင်အောင်လည်းဆေးဦး…တော်ကြာ..”..”ဟဲ့.ငါကသန့်ပြီးသား..နင်သာမပြောလိုက်ချင်ဖူး..ဟိုနေ့ကအိပ်နေတာများ…ဟင်း..” ”ကျတော်က..ဘာဖြစ်နေလို့လဲ..””ဘာဖြစ်ရမှာလဲ..နင်ဟာကြီးက..လွှတ်တော့မယ်..ဒုံးကျည်ကျနေတာပဲ..တကတည်း..ထောင်မတ်နေတာပဲ”…”ဟုတ်လား..ကျတော်တောင်မသိဘူး”..ဘယ်သိမလဲ..နင်ကအိပ်နေတာကို”…”ကဲပါ..ပြီးရင်..ဆင်းတော့…စာကျက်ရဦးမယ်..”..”ငါလည်း..နင်ပြောတာနဲ့..ပြောင်အောင်..ဆေးနေတာ..ဟေ့..ပြီးပြီ.”ဆိုပြီး..တံခါးဖွင့်ဆင်းလာတော့တယ်…..””ကဲ..ကိုယ်တော်..စာကျက်လို့..ရပြီ”’..မမသန်းလည်း..အပေါ်တက်..အခန်းထဲဝင်သွားတော့တယ်….
တရေးတမော..အိပ်ပြီး..နိုးလာတော့..မမသန်းပြန်ရောက်နေတယ်..”မမသန်း..ဘာလို့အစောကြီးပြန်လာတာလဲ..”..”ဗိုက်က.အရမ်းနာတဲ့အပြင်..ဇာတ်ကြောတွေပါထို့းလိုဲ့..ပြန်လာခဲ့တာ..”..”ဪ..ဆေးလေးဘာလေး..လိမ်းထားလေ”..”ဆေးကတော့.ကိုယ့်ဘာသာလိမ်း..ဇာတ်ကြောတော့ဆွဲပေးမယ်..”..”’အေးဟယ်..လာစမ်းပါ..”..ကျတော်လည်း..အခန်းထဲဝင်လိုက်တယ်..”မမသန်းမွေ့ယာအောက်ဆင်း..ကျတော်.နောက်ကနှိပ်ပေးမယ်”..မမသန်း..ဂုတ်ကိုစတင်နှိပ်ပါတော့..”အ..အ..နင်ကနှိပ်တက်သားပဲ…””..ပါးပါးလေးပဲရှိသေးတယ်..အ..အ…ထိလိုက်တာ..ကောင်းတယ်..ဟ.အား..ကျွတ်..ကျွတ်..မင်းမင်းရယ်..နှိပ်လက်စနဲ့..ငါ့ဗိုက်ပါ…ဆေးလိမ်းနှိပ်ပေးပါလာ…”.”နှိပ်တာကရပါတယ်..ဘေးလူမြင်လို့..မကောင်းဘူး””’ဘယ်သူရှိတာမှတ်လို့..””အာဆို..မမသန်းပက်လက်လှန်လိုက်..အကျီ င်္မ.တင်ထား…ဘယ်နားလေးလဲ..””ဒီနားလေးဆိုပြီး”..ထပ်ဆင့် အပေါ်ကိုပြတယ်..ကျတော်လည်း..ညင်ညင်သာသာလေး..လိမ်းပေးပွတ်ပေးတာပေါ့..မမသန်းကိုကြည့်တော့..မျက်လုံးမှိတ်ပြီးဇိမ်ခံနေတယ်..”မမသန်း..ထမီဖြည်လိုက်မယ်နော်..””အေး.အေး”ထမီဖြည်ပြီးတာနဲ့..ဆီးခုံနေရာလေးကို.ပွတ်လိမ်းပေး..လက်ဖနောင့်လေးက..ဆီးခုံအောက်ကို.မထိတထိလုပ်ပေးနေရင်း..”မမသန်း..အမွှေးတွေရိတ်ထားတာလား..”အေး..”..”စိမ်းနေတာပဲ..ကြည့်ချင်တာ..”ကြည့်ချင်..ကြည့်ပေါ့”..”ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်မယ်…ဆိုပြီး..ဆွဲချွတ်လိုက်တော့..မမသန်းက..တင်ပါးတွေကြွပေးတယ်..”မမသန်း..အဖုတ်ကြီးက..ဖောင်းကားနေတာပဲ..ချစ်စရာကြီး..”နင်ချစ်ချင်နေတာ..အရင်ထဲကသိတယ်..”ဘယ်လိုသိတာလဲ..မမသန်း”..ဘယ်လိုသိရမှာလေ..နင်စာကျက်တိုင်း..ငါအခန်းဘက်လှည့်ကျက်တယ်..ငါရေချိုးရင်..နင်ကြည့်နေတာ..သိသားပဲ..”.”ဟုတ်တယ်..မမသန်းရ..ကျတော်လည်း..မမသန်းအဝတ်အစားလဲတိုင်း..ကြည့်တယ်..ထမီပြင်ဝတ်တဲ့အခါ..ပေါ်သွားနဲ့.ဆီးခုံဖြူဖြူကြီးတွေကြည့်ရတာ..အမောပဲ””..”ငါ့ကို..လိုးချင်နေတာပေါ့..ဟုတ်လား”..လို့းချင်တာပေါ့..မမသန်းရယ်..ဦးလေးမျက်နှာရှိနေလို့…”ငါလည်း..နင့်လီးကြီးကိုမြင်ကတည်းက..စောက်ပတ်က.ယားနေတာ…နင့်ဦးလေးတော့..မသိစေနဲ့နော်..”.”အင်းပါ…မမသန်းအကုန်ချွတ်..တကိုယ်လုံးကြည့်ချင်လှပြီ..”..မမသန်းအဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်တော့”’..ဘယ်လိုပြောမလဲ..ရေးဆေးငါးအသွင်လို့…တောင့်တင်းတဲ့..ခန္ဓာကိုယ်မျိုးကြီး..အားရစရာကြီးပေါ့ဗျာ…မမသန်းကို..နှုတ်ခမ်းတွေစုပ်…လျှာခြင်းကလိ..လက်ကလည်း..နို့တွေကိုကိုင်..ကိုင်ရတာလည်းအားရစရာကြီးဗျာ..လက်ထဲမှာ..ပြည့်နေတာပဲ…နားဖျားလေးတွေကို..သွားလေးနဲ့ကိုက်…လျှာနဲ့ထိုးပေး..နို့သီးလေးတွေကို..ချေပေးလိုက်တာ..မမသန်းခဗျာ..တည့်တည့်မတ်မတ်တောင်..မရပ်နိုင်ဘဲ..”’အင်း.အင်း..အာ…ကျွတ်..ကျွတ်..ဟင်းဟင်း..မင်းမင်း..မမသန်းကို..ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲကွာ..”….ကုတင်ပေါ်လဲချလိုက်ပြီး..နို့တွေစုပ်..နို့သီးခေါင်းလေးပွတ်ချေပေးပြီး..ဗိုက်သားလေးတွေကို..နေရာလွတ်မကျန်..လိုက်ယက်နေလိုက်တယ်..လက်ကလည်း..မို့မို့ဖောင်းဖောင်း..စောက်ဖုတ်ကြီးကို..အပြားလိုက်ပွတ်ပေးနေတော့…အသားဖြူလို့လားမသိဘူး..စောက်ရည်တွေ.. ..တော်တော်လိုက်လာတယ်…အဲဒါနဲ့ပဲ..လျာကို..ဆီးခုံကိုယက်လိုက်တော့..”မင်းမင်း..မလုပ်နဲ့လေ..ဖုန်းနိမ့်မှာပေါ့..”ကျတော့ခေါင်းကိုအတင်းဆွဲတော့တာ..ဘယ်ရမလဲ..အတင်းကို..စောက်ဖုတ်ပတ်လည်နေရာများကို..ယက်ပေးလိုက်တော့..နည်းနည်းတော့ငြိမ်သွားတယ်..ဆက်လက်ပြီးတော့..စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းကြီးတွေ..တော်တော်ထူတယ်..လျှာနဲ့.မနည်းကို..ကလော်နေရတယ်..နှစ်ဖက်စလုံးယက်ပေးပြီး..စောက်ခေါင်းထဲကို..လျှာချွန်ပြီးထိုးထည့်လိုက်တော့…လျှာဒဏ်မခံဖူးတဲ့..မမသန်း..ကော့လန်တက်တော့တာပဲ..”အိုး..အိုး..ဟင်းဟင်း..ကျွတ်..ကျွတ်…အား..အား..အိုကွယ်..ဟင့်..ဟင့်…မင်းမင်းရယ်..မမသန်းကို..ဘယ်လိုတွေလုပ်ပေးနေတာလဲ….အို..အို..ပြောကာမှ…အင်း..အင်း..မရတော့ဘူး..မမသန်းမခံနိုင်တော့..ဖူး….လိုးပေးပါတော့…အား..အား..””’မမသန်း..အလိုးခံချင်ပြီလား..”.”ခံချင်တော့ပေါ့မင်းမင်းရယ်…လိုးပေးတော့..နော်”’…ကုတင်ပေါ်..တစောင်းလေးထား..ဒူးဆစ်လေးကိုကွေးလိုက်တော့..တင်းပါးသားကြီးနှစ်ခုကြား..ပြူးထွက်နေတဲ့..စောက်ဖုတ်ကြီးက..အရည်ကိုရွှဲနေတာပဲ..လီးကို..အဖုတ်ဝမှာတေ့..ခါးအားကို..အသုံးပြုပြီးဆောင့်လိုးလိုက်တာ…””အမလေးလေး..မင်းမင်းရယ်..ကြမ်းလှချည်လား…ဗြစ်..ဗျစ်..ဘွတ်..ဘွတ်..အွတ်.ဒုတ်.””.ဆက်တိုက်တလစပ်ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်..အားအား..အမလေး..အား..အား..ဟင်းဟင်း..ကျွတ်..အ..အု..ကျွတ်ကျွတ်..”.မမသန်း..ကျတော်လိုးတာ..ကောင်းလား….””ကောင်းတာပေါ့မင်းမင်းရယ်..”..”မှောက်လိုက်နော်..ကျတော်..်မမသန်း..ဖင်တွေကြည့်လိုးချင်လို့ပါ..”..”ဖင်နည်းနည်းထောင်…ခါးကိုခွက်ထား..အဲဒါမှ..မမသန်းစောပတ်က..နောက်ကိုပြူးထွက်လာမှာ…ဟုတ်ပြီ”ကျတော်လိုးတော့မယ်နော်..မမသန်း”..ပြောလည်းပြော..ဆောင့်လည်းဆောင့်လိုးလိုက်တော့….””ဗျိ.ဗျိ..ဗြွတ်..ဗြွတ်..ဘုတ်…ဘွတ်..ဘွတ်..ဖက်..ဖက်..အား..အား..အင်းအင်း..အမလေးလေး..ကောင်းတယ်….အီစိပ့်နေတာပဲ…ဆောင့်..ဆောင့်..နာနာဆောင့်..အား..အီး..ဟင်း..ကျွတ်..ကျွတ်..ကောင်းလိုက်တာ..လင်လေးရယ်…အားအား..””မမသန်းရယ်..ဖင်ကြီးတွေ..ကိုင်လိုးရတာ..အားရလိုက်တာဗျာ…”ဘွတ်..ဘွတ်..ဗြစ်..ဗြစ်..ဒုက်…အင်းအင်း..အင့်..အင်..ဖက်..ဖက်”အား..အား.မင်းမင်း..မမပြီးတော့မယ်..ဆောင့်ဆောင့်…မရပ်နဲ့..အား..အား..အိုး..အိုး..ကောင်းတယ်..ကောင်တယ်…”ကျတော်လည်း..ဆက်တိုက်မရပ်ပဲ..ကပ်ဆောင့်ပေးနေလိုက်တယ်..”ပြီ…ပြီးပြီ…ပြီး..အိုး..အိုး..အား..အား..အင်းအင်း..ထွက်တော့မယ့်….ထွက်တော့.မယ်..အမလေး..လေး..ဟင်း..အား.အ..အ..ထွက်ပြီ..ထွက်ပြီး..အ..အ.”ကျတော်.လည်း..သုတ်ရည်တွေ..မမသန်း..စောက်ခေါင်းထဲ..ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်…
ခဏနေတော့..”မမသန်း..ကျတော်နဲ့ဦးလေး..လိုးတာ..ဘယ်သူပိုကောင်းလဲ..”.”မင်းမင်းက..လိုးလည်းလိုးတက်တယ်..ဆောင့်လည်းဆောင့်နိုင်တယ်…နောက် အမောခံနိုင်ပြီး..ကြာလည်းကြာတော့..မင်းမင်းလိုးတာကို..အရမ်းကြိုက်တယ်..”.”မမသန်းတို့မိန်းခလေးတွေက..ဘာလို့ကြာတာကိုကြိုက်တာလဲ..မင်းမင်းမကြားဖူးဘူးလား..တိုသည်.ရှည်သည်.ထိုနှစ်လီ(လီ=လီး)ဒေါ်နီမသိ..ကြာကြာထောင်းတဲ့လီးချောင်း..အကောင်း..တဲ့..”.ဪ.”လီးကရော..ဘယ်သူပိုကြီးလဲ.”.”တူတူလောက်ပဲ..မင်းမင်း..အတွင်းနံရံတွေထိတယ်..လိုးတက်တယ်..”.”အဲဒါနည်းမစုံသေးဘူး..ပုံစံမျိုးစုံလိုးပေးမယ်..”..အချိန်ရှိတုန်း..ထပ်လိုးချင်တယ်..”..နင်ကလည်း.မဝသေးဘူးလား ညနေမခိုင်လာမှာ..တော်ကြာတွေ့သွားမှဖြစ်..”..မလာခင်လေးနော်..မမသန်း..”..”ကဲ..ကဲ..သဘော..သဘော..”လိုးဖို့..ပြင်တုန်းရှိသေး..အိမ်ရှေ့က..”မသန်း..မသန်း..”ကဗျာကယာပြေးထွက်ပြီး..ရှိတယ်..အခန်းထဲမှာ..လာလေ..မခိုင်”..မခိုင်လည်းအောက်မှာထိုင်နေတုန်း..မမသန်းအပေါ်ထက်ကဆင်းလာပါတော့တယ်…
မခိုင်က..မမသန်းစတိုးဆိုင်က..စာရေးမ..အသားက.ခပ်လတ်လတ်..ဆံပင်ကရှည်တယ်..မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း..ခါးကသေးပြီး..တင်ကားတယ်..မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်တာများတယ်…အိမ်လာရင်တော့..မမသန်း အကျီ င်္တွေဝတ်တယ်..မခိုင်လာတိုင်း..စာပြပေးတယ်..ကျတော်အိပ်မှအိပ်တယ်…
Physics..ပုစ္ဆာ တွေက.concave mirrorနဲ့convex mirrorတွေ..+(or)-သတ်မှတ်တာတွေရှင်းပြပါလား”အဲဒါနဲ့ပဲ..မမခိုင်က.ကျတော့ညာဘက်မှာထိုင်ပြီးရှင်းပြတယ်..တခါတခါ..သူ့ဘယ်ဘက်နို့က.ကျတော့ညာဘက်ဖခုံးကို..တိုက်တိုက်နေတယ်..နို့တွေက..အိနေတာပဲ..သူ့မတိုက်တဲ့.အခါကျရင်..ကျတော်က.နောက်ဖက်မှီပြီးတိုက်တယ်..အသားတွေလည်းနည်းနည်းတော့တုန်နေတယ်..ငပဲကလည်း..အောက်ကနေ..ရုံးရုံးထွက်လာတယ်…ခဏနေ..စာသင်တာပြီးသွားတော့..စကားစမည်ပြောကြတာပေါ့..”မမခိုင်က..အားကစားလုပ်တာလား”..”ဟင်..လုပ်ပါဖူး..ဘာဖြစ်လို့လဲ..”.မေးကြည့်တာပါ”..ကဲ..ဘာကိုကြည့်မေးတာ..””အမှန်တိုင်းပြောရမလား”””အင်း..ပြော”….. .မမခိုင်..ကိုယ်ခန္ဓာက..သူများနဲ့မတူဘူးလေ..လှတယ်..”..ဘာလှတာလဲ”..”ဪ..မမခိုင်ကလည်း..မသိတာကျ..”..”မင်းမင်း..ပြောမှသိမှာပေါ့..”.”မမခိုင်ရဲ့..တင်ပါးကြီးတွေလေ..ကြီးပြီးလှုပ်ခါနေတာပဲ..ခါးကလည်း..သေးသေးလေး..ခြေလှမ်းတိုင်း..တုန်နေတာပဲ..”..”မင်းမင်းက..တင်ပါးတွေကြည့်ပြီး.စိတ်ကူးယဉ်နေတာပေါ့..”..”ဟဲ..ဟဲ..တခါတလေပါ..နောက်ပြီး..အတုကြီးတပ်ထားလား..ထင်ရတယ်..အဲလောက်လှနေတော့..”..”မတုပါဘူးဟယ်..အစစ်ပါ..မယုံရင်..ကိုင်ကြည့်”..ဆိုပြီး..ကျတော့ရှေ့ထိုင်လိုက်တယ်..ညင်ညင်သာသာလေး..ပွတ်ပြီး..လက်သည်းနဲ့ထိုးလိုက်တာ”..အို့…နာတာ.ဟယ်”သိဖူးလေ..အတုက..မနာဘူးဆိုလို့..ထိုးကြည့်တာ”..”ကဲ..ယုံပြီလား..”..ယုံပြီ..”..ကျတော့ဘက်လှည့်.မျက်စောင်းလေးထိုးလိုက်သေးတယ်…”မမခိုင်က..ယောက်ကျားက..တော်တော်ချစ်မှာပဲနော်..”..”ချစ်တာမှ..စုံလို..”..”ဟင်..ဘယ်လိုစုံတာလဲ..”..”ပြောစရာလား.ဟဲ့”..”ပြောပြပါ”..”မင်းမင်းက..ချစ်သူရှိဖူးလား..”မရှိပါဘူး..”တခါတလေတော့..ဟိုကားတွေကြည့်တယ်”..”ကောင်လေးနော်..စာမကျက်ပဲအတက်ကောင်းတွေတက်နေတယ်..”.”အဲဒီ..ကားတွေကြည့်ပြီး..ချစ်ချင်နေတာပေါ့..”ချစ်တော့..ချစ်ချင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့်ကျတော့ကို..ဘယ်သူက.ချစ်မှာလဲဗျာ..”.ဆိုပြီး..မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောလိုက်တော့..”မင်းမင်းရယ်..အဲလိုတော့..မပြောပါနဲ့..မင်းမင်းချစ်ချင်ရင်..မမခိုင်ကိုချစ်နော်.”.ဆိုပြီး..တဏှာမွှန်နေတဲ့..မျက်နှာလေးနဲ့..ကျတော့ကိုပြောလာတယ်….မမခိုင်..ယောက်ကျားက,.စစ်တပ်ကလေ..ရှေ့တန်းမှာ..တိုက်ပွဲကျသွားတာ..နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ..မမသန်းတို့စတိုးဆိုင်ဝင်လုပ်..အိမ်လာရင်း..ခင်သွားကြတာ..ခုတော့.ကျတော်..မှန်းမှန်းထုနေရတဲ့..သူကိုလိုးရတော့မယ်ဆိုတော့..နောနော်..ဆိုသလို..အတိုင်းအထက်အလွန်..ပေါ့….
မမခိုင်..ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်..နဖူး..ကိုနမ်းလိုက်တယ်..ပြီးတော့..နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်..အပေါ်နှုတ်ခမ်း၊အောက်နှုတ်ခမ်း..တလှည့်စီစုပ်…ပါးစပ်ထဲ..လျှာထည့်..ကလိပေး..လက်ကလည်းနို့တွေပွတ်ပေးနဲ့.မမခိုင်တကိုယ်လုံး.ကျတော့ရင်ခွင်ထဲမှာ..ပျော့ခွေနေတယ်..”အကျီ င်္ချွတ်လိုက်မယ်နော်.”’.မမခိုင်က..ဘောလီချိတ်ကို..ဖြုတ်ပေးတယ်..နို့တွေက..လုံးပြီးနို့သီးခေါင်းတွေချွန်ထွက်နေတယ်..နို့တွေစုပ်လိုက်..ချေပေးလိုက်နဲ့.မမခိုင်ခဗျာ..တွန့်..တွန့်သွားတယ်..ထမီကိုဖြည်လိုက်တော့..ကြီးမားတဲ့တင်သားများကို..ဖုံးအုပ်ထားတဲ့..အတွင်းခံပန်းရောင်လေး.ပေါ်လာတယ်..မချွတ်သေးပဲ.အပေါ်ကနေ..အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားကို..လက်ခလယ်လေးနဲ့..ကလိပေးလိုက်တယ်..စောက်ရည်တွေက..အတွင်းခံကိုစိုလာပြီ..”ဟင်း..ဟင်း..မင်းမင်းရယ်…အ..အ..ကျွတ်..ကျွတ်…”မခံတာ..ကြာလို့လားမသိဖူး..မမခိုင်..အပျိုမလေးလို..ကြွ..ရွ..နေတယ်..အသာလေး.တွန်းလှဲပြီး….အတွင်းခံကို..ချွတ်လိုက်တယ်..””မမခိုင်..စောက်ဖုတ်ကြီးကို..ကျတော်ယက်ပေးမယ်နော်”..”ဟယ်..ငရဲတွေ..ကြီးကုန်ပါ့မယ်..”..ကျတော်လည်း..မမခိုင်ခြေရင်း..ခြေနှစ်ဖက်ကြား..ဒူးထောက်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး….နူးအိနေသော..ပေါင်တွင်းသားများကို..ပထမဆုံး.ယက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ..မမခိုင်က..တခါမှယက်ခံဖူးသူတယောက်မဟုတ်လေရာ..”.အ..အဟ..ယားတယ်ဟဲ့..”ကျတော်လည်း..အမဲနံရတဲ့..ကျားဆိုးပမာ..မမခိုင်..စောက်ဖုတ်နား..မျက်နှာထိုးကပ်ပြီး..စပျစ်သီးခန့်ရှိသော..စောက်စေ့.ကို..စုပ်ယူလိုက်တယ်..မမခိုင်တကိုယ်လုံး..လှိုင်းမိသော..လှေပမာ..လူးခါသွားသည်…”အို…အို..မင်းမင်းရယ်..ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲကွယ်…”ကျတော့ဆံပင်တွေ..ထိုးဖွရင်း..ဖင်ကြီးတွေက. ကြွတက်လာလေရာ..ကျတော့နှခေါင်းနဲ့..မမခိုင်စောက်ပတ်အုံကြီး.ဖိကပ်မိရာ..ဆပ်ပြာနံ..သင်းသင်းလေးကို..နမ်းရှိုက်မိလိုက်သည်..အားမရသေးပဲ…လက်နှစ်ခန့်ထူသည့်..မမခိုင်..စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို..ဆွဲဖြဲကာ..နီရဲသောအတွင်းသားများကို..ဆိတ်ရိုးထဲက..ရိုးတွင်းချဉ်ဆီစုပ်သကဲ့သို..”ရှလူး”’မည်အောင်..စုပ်ယူလိုက်တယ်…စက်ပတ်အတွင်းသားများက..အလွန်တရာနူးညံသည့်..အားလျော်စွာ..လေဖြင့်..အစုပ်ခံရသောအခါ..ကျတော့ပါးစပ်ဝမှာ..အစုအပြုံလိုက်..ပါလာလေသည်..”’အား..အား..သေပါပြီ..မင်းမင်းရယ်..”မမခိုင်ခဗျာ..အူတွေအသည်းတွေ..ဆွဲနှုတ်ခံရသလိုဖြစ်ပြီး..တင်ပါးများပင်..ဇိုးဇိုးဇက်ဇက်တုန်နေတယ်..”အိုး..အိုး..ကောင်းလှချည်လားကွယ်..အင်း..အင်း..ဟင်းဟင်း..ကျွတ်..ကျွတ်..အား..အား…မရတော့ဘူး..အား..အ..အ”ဆိုပြီး..ကျတော့မျက်နှာကို..စောက်ရည်တွေ…စပရေးဂန်းဖြင့်..ဖျန်းသလို.ပန်းထွက်ကုန်တယ်..”’ကဲ.အ..ကန်တော့ပါမင်းမင်းရယ်..ကန်တော့..ကန်တော့..မင်းမင်းကို..မမ.လိုးပေးမယ်နော်..”..”မမခိုင်က.ကျတော့ကို..လိုးပေးမလို့လား..”…”အင်းပါလို့ဆို..ကဲ..ထ..ပက်လက်လှန်လိုက်..”..မမခိုင်လည်း..ကျတော့ပေါ်ခွပြီး..လက်ပြန်နဲ့လီးကိုကိုင်..စောက်ပတ်ဝမှာတေ့ပြီး..ညင်သာစွာ..ထိုင်ချလိုက်တယ်…”’..ဗြစ်..ဗျိ..ဗြစ်..ဘွတ်..”..မမခိုင်က..အရပ်ပုတော့..စောက်ခေါင်းတိမ်တယ်လေ..အဲဒီတော့..”ဒုတ်..ဒုတ်..”မည်သံနဲ့..သားအိမ်ခေါင်းကို..ထိုးမိတာပေါ့..အဲဒါနဲ့..ခန္ဓာကိုယ်ကို…. ကိုယ်ခန္ဓာကို..ရှေ့သို့ငိုက်ချလိုက်ပြီး..တင်စိုင်ကြီးများအားပြုကာ..ဆောင့်နေသည်…”ဗြစ်..ဗြစ်..ဗျိ..ဗျိ..ဘွတ်..ဘွတ်..ဒုတ်…အိုး..အိုး..ရှီး..ကွဲသွားပြီ..”မမခိုင်..အားရှိပါးရှိ..ဆောင့်လိုက်တာ..စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေး..ကွဲသွားတယ်….”’..အား..လား..လား..”..မမခိုင်..ညည်းသံတွေက..ကျတော့လီးကို..ပိုမို..သန်မာစေတယ်..”..မမခိုင်..ရယ်..လိုးရတာ.အားမရဘူး….မမခိုင်.ဖင်ကုန်းပေး..”..အေး..အေး”ဆိုပြီး..ချက်ချင်းကုန်းတော့တာ.တင်ပါးကြီးနှစ်ခုကိုင်ပြီး..ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်တယ်..”’ပြွတ်..စွက်..စွက်..ပြွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်.”..”အအား..အအား..အအား..ကျွတ်..ကျွတ်..မောင်းနဲ့ထောင်းနေတာလား..မင်းမင်းရယ်..ပြွတ် ပြွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်..စွပ်..အိ..အိ..အင့်..အင်.့..အင့်..သေပါပြီ”..”..ကျတော်လည်း..မညာတမ်း..စက်သေနတ်ပစ်သလို..ဆင့်ကာဆင့်ကာ..ဆောင့်လိုက်တာ..မအောင့်အီးနိုင်တော့ပဲ..မမခိုင်လည်း..စောက်ရည်တွေ..ဆစ်ကနဲ..ဆစ်ကနဲ့..ထွတ်ကျကုန်သလို..ကျတော်လည်း..သုတ်ရည်ကို..မမခိုင်..စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ..ပန်းထည့်လိုက်ပါသည်…..ဒီနေ့..့..အိမ်မှာ..မမမိုးမှလွဲ၍.ဘယ်သူမှမရှိကြပါ…သူက.Gymဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး..တနင်္လာနေ့တိုင်းပိတ်တယ်..အိမ်မှာလုပ်စရာရှိသည်များ..အားလုံးလုပ်ထားသည်။ကျတော်လည်း..ဒီနေ့ဗိုက်နာတာနဲ့..ဆရာမခွင့်တောင်းပြန်လာခဲ့တယ်…အိမ်ရောက်တော့..တံခါးဝမှာ..ကျားစီး..ဖိနပ်တရံတွေ့တယ်.ဧည့်သည်ရောက်နေတာဆိုပြီး..အသာလေးတက်ခဲ့တယ်…အပေါ်ရောက်တော့..”တအား..အား”..အသံတွေကြားနေရတယ်..မမမိုး..အခန်းက့..တံခါးကြီးပွင့်နေတယ်..ခြေဖွလျောက်..ခုံခုပြီး..သံဇကာပေါက်က..အခန်းထဲကိုကြည့်လိုက်တော့..မမမိုး..အဝတ်ဗလာနဲ့..ကုန်းပြီး..အနောက်ကတယောက်..ဆောင့်လိုးနေတာတွေ့ရတယ်….ဖုန်း.ထုတ်လိုက်ပြီး..ဗွီဒီယို..ရိုက်လိုက်တယ်…ခဏကြာတော့..မမမိုးကို..ပက်လက်လှန်လိုက်တယ်..စောက်ဖုတ်ကလည်း..စောက်မွှေးတွေ..မည်းနေတာပဲ..မျက်လုံးမှိတ်ပြီး..ပေါင်ကားပေးလိုက်တယ်..လီးအလာစာင့်နေတာနဲ့တူပါတယ်..”ဪ..မမမိုး..တော်တော်ထန်တာပဲ”.လို့.စိတ်ထဲတွေးလိုက်တယ်..ဟိုကောင်ကလည်း..သိပ့်တောင်..မဆောင့်လိုက်ရဖူး..”အား..အား..အား..”ဆိုပြီး..ငြိမ်သွားတော့တယ်..”ကိုကိုကလည်း..ပြီးပြီလား..မိုး..တောင်မပြီးသေးဘူး..ဟင်း.”နောက်တပတ်ပေါ့..မိုးရယ်..”အဝတ်အစားတွေ..ကောက်ဝတ်ပြီး..ပြန်သွားတော့.တယ်…ကျတော်လည်း..ကဗျာကယာ.ဆင်းပြီး..မမမိုး..အခန်းရှေ့မတ်တက်ရပ်လိုက်ပါတယ်..””ဟင်..မင်းမင်း..ဘယ်တုန်းကရောက်နေတာလဲ..”..”..သိချင်လား..ဒီမှာ..ဗွီဒီယိုရိုက်ထားတယ်..ကြည့်မလား”..မင်းမင်းရယ်..ဖျတ်လိုက်ပါ..နော်.”.”ဒီလိုလုပ်လို့ရမလား..”
“”ဒါ..ဒါ..ဆို..ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဟင်..”..ဘာလုပ်ပေးရမလဲ..ဒီမှာကြည့်လေ..”..ကျတော်ပုဆိုးကို.လှန်ပြလိုက်တော့..ထောင်မတ်နေတဲ့..လီးကို..မြင်ပြီး..မမမိုးတယောက်..အငြို့ခံထားရသူပမာ..ငေးစိုက်ကြည့်နေတယ်..လီးကို..ခါယမ်းပြလိုက်တော့..”မဖြစ်ပါဘူး..မင်းမင်းရယ်..”မဖြစ်လည်းရတယ်လေ..မမမိုး..အလိုးခံတာကို..လူတိုင်းပြလိုက်မှာပေါ့..”..”အဲ.အဲလိုတော့..မလုပ်ပါနဲ့..မဖြစ်နိုင်လို့ပါမင်းမင်းရယ်..”ပြီးရောဗျာ…မခံနဲ့..ဒါပဲ.လူတိုင်းကို.ပြပြီသာမှတ်လိုက်တော့..”မလုပ်ပါနဲ့မင်းမင်းရယ်.မမမိုး..မမမိုး.ခံ.ခံ..ခံပါ့မယ်..”..”ဒီလိုမှပေါ့”..မမမိုးနားကပ်သွားပြီး..နှုတ်ခမ်းလေးစုပ်လိုက်တယ်.အဖုတ်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့..အရည်တွေက..စိုနေတုန်းပဲ..အသာလှဲချလိုက်ပြီး..မမမိုးစောက်ဖုတ်ကို..လီးထိပ်နဲ့အလျားလိုက်ပွတ်ဆွဲလိုက်သေးတယ်..စောက်စိကို..ထိတဲ့အခါ..တွန့်တွန်းသွားတယ်..၁၀..ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးပြီ..မမမိုးစောက်ဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်…””””အား..အား..အား..အမလေး..ဘွတ်..ဗြွတ်..ဗြွတ်..ဘွတ်.ဘွတ်..အု..အု..အား..နာလိုက်တာ..မင်းမင်းရယ်…အား..အား…ဖြည်းဖြည်းဆောင့်ပါ..အရမ်းနာတယ်..အ..အ..”ကျတော်လည်း..ဆောင့်ချက်တော့..လျော့ပြီး..ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်..လိုးပေးလိုက်တာ..သိပ်မကြာပါ…မမမိုးပါးစပ်မှ…”ဟင်း..ဟင်း..အား..ကျွတ်..ကျွတ်…အင်း..အင်း…ကောင်းတယ်..ကောင်းလိုက်တာ..အား..အား..မင်းမင်း..မောင်လေး..အားမနာနဲ့နော်..ဆောင့်..ဆောင့်..မမမိုး..ခံနိုင်ပြီ…နာနာညှောင့်လိုးပေး..နော်..အား..အား..”..မမမိုး…ကျတော်လိုးတာ..ကောင်းလားဟင်..”..”.ကောင်းတာပေါ့..မင်းမင်းရယ်..”..မမမိုး..ကုန်းပေးပါလား…မောင်လေး..ခွေးလိုးသလို..လိုးပေးမယ်လေ..”..မမမိုး..ဒူးခေါင်းနှစ်ဖက်.. အနည်းငယ်ချဲ..မျက်နှာကို..မွေ့ယာပေါ်.ကပ်လိုက်တော့..ဖင်ကြီးက..ထောင်နေပြီး..စောက်ဖုတ်က..ပြူးထွက်နေတယ်…တင်ပါးနှစ်ဖက်စုံကိုင်ပြီး..စောက်ဖုတ်ကြီးကို..လျှာအပြားလိုက်..ယက်လိုက်တော့..”အို့..”..ဖင်ကြီးပိုထောင်သလိုဖြစ်သွားတယ်..အပေါ်အောက်ယက်လိုက်..စောင်းခေါင်းအတွင်း..လျှာချွန်ပြီးထိုးလိုက်…စောက်ဖုတ်နှုတ်သားတွေကို..လျှာနဲ့ကလော်ထိုးလိုက်..အမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ကလိပေးသည့်အပြင်….ပွစိ..ပွစိ..စအိုးလေးကို..ယက်ပေးလိုက်တော့..”အို့..အို့..မင်းမင်းရယ်..ဘယ်လိုများလုပ်နေတာလဲကွယ်… …မမမိုး..အူတွေ..အသည်းတွေ..ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီလဲ..မသိတော့ဖူး..မမမိုး..ခုလို..တခါမှ..မခံစားဖူးဘူး…ထပ်မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့..မင်းမင်းရယ်..မမမိုးကို..လိုးပေးပါတော့…လိုးပေးတော့နော်မောင်လေး..အင်း..အင်း…ဟင်း..ဟင်း..ကျွတ်..ကျွတ်..အ..အ..ဟင်း..အင်း..အမလေး..လေး..အ..အ..”.
……ပြီးပါပြီ။ [copy ]
အ မေရိကန်size လိင်တံကြီးရှည်စက် အကောင်းစား pump